यसलाई "Maynkraft" प्ले को मजा को एक ठूलो भाग अनुसन्धान आउँछ भन्ने कुनै गोप्य छ - आकस्मिक - खेल संसार, विशाल विविध र सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ। तपाईँले नयाँ खेल सुरु हरेक समय, यो अंधाधुंध तरिका उत्पन्न भएको छ, त्यसैले तपाईं लगातार नयाँ क्षेत्रमा धेरै रहस्य राख्न भनेर असाधारण अन्वेषण हुनेछ। तर, यो खुट्टा को आन्दोलन धेरै उपयुक्त छैन भनेर बुझे गर्नुपर्छ। यसको आफ्नै खुट्टा मा, तपाईं आसपास क्षेत्र, तर कुनै थप अन्वेषण गर्न सक्छ। तपाईं आफ्नै परिवहन भने मात्र टाढा मुलुकमा तपाईं विषय हुनेछ। तपाईं यस्तो घोडा वा गधा रूपमा, एक पाल्तु जनावर रत्तीएको गर्न सक्नुहुन्छ, र तिनीहरूलाई मा एक यात्रा एक alchemist बन्न र गति को एक औषधि आविष्कार गर्न सक्नुहुन्छ, तर क्षणमा सबै भन्दा राम्रो तरिका वाहन को आन्दोलन हो। तर कसरी mods बिना "Maynkraft" मा कार बनाउने? यो गर्न, तपाईंले केही सरल कदम भन्दा छैनन् के गर्न आवश्यक छ, तर परिणाम साँच्चै यो लायक छ कि सम्झना हुनेछ।
कसरी "Maynkraft" मा एक कार बनाउन तपाईं पाङ्ग्रा छैन भने, mods बिना? यी भागहरु को Kraft प्राप्त गर्न समय त पाङ्ग्रा बिना कार, जान हुनेछ। Zverin छाला र फलाम ingot, तपाईं धेरै आवश्यक पहिलो स्रोत, धेरै आठ रूपमा खाल एक पाङ्ग्रा बनाउन, दोस्रो स्रोत एक पटक मात्र आवश्यक छ - तपाईँ स्रोतहरू दुई प्रकार आवश्यक हुनेछ। छाला त्यसैले यस्तो घोडा, गाई, गधाहरूमाथि रूपमा जनावर, हत्या गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ, र। फलाम ingot लागि, यो दुई तरिकामा प्राप्त गर्न सक्छन् - फलाम अयस्क भंडार बनाउन पछि, आफ्नै पगाल्न संसारभरि छरिएका छन् कि, वा ओवन मा चेस्ट फेला। यस पीठ को केन्द्रीय कक्षमा पट्टी राख्न, र त्यसपछि आठ खाल संग चारै ओर, र त्यसपछि शिल्प सुरु - पहिलो पाङ्ग्रा सेट! प्रक्रिया चार पटक दोहोरिन, र तपाईं हात मा छ आफ्नो कार को लागि पाङ्ग्राहरू को एक सेट हुनेछ। तपाईं कसरी mods बिना "Maynkraft" मा कार बनाउन को प्रश्न सुलझाने गर्न एक कदम नजिक छन्। अब यो इन्जिन सुरु गर्न समय।
बुझ्न कसरी कार बनाउन mods बिना "Maynkraft" मा, तपाईं कल्पना गर्न आवश्यक कसरी वास्तविक जीवन मा साधारण कार। स्वाभाविक, उनको कामको लागि एक इन्जिन कि आवश्यक र तपाईं तैयार गर्न छ। यहाँ नुस्खा पाङ्ग्रा संग मामला हो, त्यसैले तपाईं प्रक्रियामा आवश्यक हुनेछ भनेर स्रोतहरू विभिन्न शेयर तयार रूपमा, त्यसैले सरल छैन। पहिलो तपाईं पाङ्ग्रा सिर्जना गर्न फलाम बारहरू आवश्यक भएकोले पहिले नै यो छ हुनत, ओवन obzavedites। यो समय, तिनीहरूले पनि, तपाईंले एक पिस्टन हुनेछ रूपमा आवश्यक हुनेछ। यस मामला मा पिस्टन को नुस्खा सबैभन्दा कठिन - ingot बाहेक तपाईं बोर्ड, पत्थर र रातो धूलो आवश्यक छ। दुई गहिरो कक्षहरू मा पिस्टन ठाउँ, र ओवन समाप्त - केन्द्रीय तल सेल मा। आवश्यक पिस्टन अत्यन्तै सरल उत्पादन जो दुई torches, व्यवस्था माथि - बस skraftit सँगै र कोइला छडी आवश्यक छ। ओह, र केन्द्रिय कक्षमा पूर्णता खातिर, रातो धूलो राख्न, त्यसपछि तपाईं शिल्प गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं एक समाप्त इन्जिन हुनेछ। अर्को चरण - मिसिन नै। mods बिना "Maynkraft" मा यो यति सजिलो बनाउन, तर तपाईं पहिले नै सबै सामाग्री छ।
मेशिन सिर्जना अन्तिम चरण
त्यसैले, तपाईं इन्जिन छ र पाङ्ग्रा दुई जोडी - अब तपाईं सबै हराइरहेको वस्तुहरू सङ्कलन र अन्तिम शिल्प लागि तयार गर्न आवश्यक छ। तपाईं जब फलाम को थप दुई बारहरू र obzavedetes mods बिना कार तैयार गर्न कसरी सिक्न काठ छाती। पट्टी को एक - चरम स्थिति तल्लो कुनामा व्हील, र तिनीहरूलाई बीच मा पीठ मा। दोस्रो बार - यो ingot माथिको छाती र बायाँ आफ्नो दाहिने स्थिति मा मोटर राखे। यो शिल्प मा बटन थिच्न मात्र रहन्छ, र तपाईं एक नयाँ कार को गर्व मालिक हुन्छन्। र तपाईंलाई अब mods बिना एक कार निर्माण गर्न कसरी रहस्य, लामो दूरी को आन्दोलनहरु समस्या तपाईं हुनुपर्छ भनेर छैन मालिक हो।
स्वाभाविक, यो तपाईँको मेसिन podzapravki आवश्यकता बिना अनिश्चितकालीन यात्रा हुनेछ भन्ने आशा गर्न आवश्यक छ। मा "Maynkraft" सबै त "फिड" तपाईं अझै पनि छ आफ्नो चार-खुट्टे मित्र, वास्तविक जीवनमा जस्तै तरिकामा हुन्छ। यो जो तपाईं सूची मेनु प्रयोग गरेर, कार को इन्धन ट्यांक मा राख्न सक्छ कोइला, गरेको छ।
आन्दोलन को सुविधाहरू
तपाईं एक कार छन्, यो भरिएको र तपाईं अब एउटा यात्रा मा जान सक्नुहुन्छ भनेर सार्न तयार छ। सिक्न र तपाईँले "Maynkraft" मा मिसिन नियन्त्रण रूपमा हुनेछैन दाँया मा पारित गर्न एकदम सरल छ, तपाईं मात्र एक सानो अभ्यास आवश्यक छ। यो आन्दोलन आफ्नो चरित्र को मामला मा जस्तै बटन द्वारा बाहिर छ, तर कारण खेल मिसिन चल्दैन यो दिशा मा प्रमुख "फिर्ता" सञ्चालन छैन। तर, तपाईं "सिफ्ट" कुञ्जी प्रयोग गरेर सुस्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो खेल मा ड्राइभिङ सबै सरल विज्ञान हो।
परभक्षी को खेल लीग: हाइड "कर्म"। हाइड नायक कर्म (कर्म): वर्णन, खण्डमा र सिफारिसहरू को सुविधाहरू
Minecraft अर्को गर्न rasprivatit ट्रंक रूपमा
ईर्ष्या: यसको उपस्थिति को कारण उन्मुक्ति कसरी
बेल्जियमको झण्डा कस्तो देखिन्छ र यसको अर्थ के हो?
हाम्रो घर मा ब्राजील को एक देशी - bougainvillea। उनको हेरचाह